Apple Music-ka ugu caansan 2017 kan Spain waa: Ed Sheeran, Luis Fonsi iyo Joaquín Sabina | Waxaan ka socdaa mac
Sida sanad walba Apple noo tusiso guulaha ugu waaweyn ee barnaamijyadeeda, iBooks, Podcasts, music iyo kuwa kale, iyo sanadkan 2017 on Apple Music horeba waxay u leeyihiin hits ay si fiican u qeexan. Had iyo jeer way fiicantahay in laga cadeeyo fanaaniinta iyo heesaha ugu caansan dalkeena kiiskanna waa iska cadahay hadaan eegno soo dejinta iyo soo saarista.
Sida aan ku arki karno cinwaanka maqaalkan, Ed Sheeran, Luis Fonsi iyo Joaquín Sabina ayaa ah kuwa ugu cad cad ee xukuma Spain sida uu sheegayo Apple Music. Dhinaca kale, waxay kaloo xusayaanAdiga ayaa laguu magacaabay abaalmarinta GRAMMY Awards, kuwaas oo ahaa fanaaniinta Apple Music Up Next 2017 Khaalid, Daniel Caesar iyo 6LACK.
Markan waxaa Albamka sanadka waa "Qeybi" Ed Sheeran, iyo heesta ugu guulaha badan waa "Despacito" oo uu sameeyay Luis Fonsi (oo leh Daddy Yankee). Meel labaad oo ka mid ah jaantusyada albamka Isbaanishka ee sanadkan 2017 waxaan ka helnay albumka "Waan Diiday Wax Walba" waxaa qoray Joaquín Sabina.
Runtu waxay tahay in adeegga muusikada ee Apple ay si aad ah u shaqeyneyso mana dhihi karno in tartanku deggan yahay, halkii uu caksanaan lahaa Apple badanaa waxay si fiican wax u qabataa markay tahay muusikada iyo markaad sidoo kale ku darto inay haystaan ​​lacag ku filan iyo caan si ay ula tartamaan madax-ilaa-madax qof kasta, natiijooyinka ayaa wanaagsan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira malaayiin isticmaale oo aan bedelin ciyaartoy isla markaana la sii wata ciyaartoy kale, laakiin kuwa kale oo badan oo ku habboon ama doorbid ah ayaa u beddelay Apple iyo Waxay ku qanacsan yihiin buugga, sida ay u shaqeeyaan barnaamijka App iyo kuwa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kuwa ugu caansan Apple Music 2017 kan Spain waa: Ed Sheeran, Luis Fonsi iyo Joaquín Sabina
Waxay ku sii jirtaa isla qiimaha Apple Care + ee iMac ee loogu talagalay iMac Pro